Izimpawu zekati lakho uma lingaphilile | Amakati kaNoti
Izimpawu zekati lakho uma lingaphilile
Ezikhathini eziningi, singasola ukuthi ikati lethu aliphilile kahle, futhi esikhundleni sokulihambisa ngokushesha kudokotela wezilwane, silinda izinsuku ezimbalwa ukugula noma lezo izimpawu ezenza sicabange ukuthi uyagula. Kodwa-ke, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi kunezimpawu ezintathu ezingenakugwenywa, futhi ezingasazisa uma ikati lethu liphethwe yisifo futhi lidinga ukuvakashela udokotela wezilwane ngokushesha okukhulu.
Amehlo abomvu: Ikati elinamehlo abomvu nelinokuvuvukala liyisifo sohlobo oluthile lokutheleleka. Ngokuvamile, amehlo ekati angawuphendula lo mbala, ngenxa yezinhlobo ezahlukahlukene zezifo, phakathi kwazo okungukutheleleka kwejwabu leso elingaphandle, ijwabu leso lesithathu, i-cornea, phakathi kwabanye. Ngendlela efanayo, lolu shintsho lombala lungaba futhi uphawu lokuthi isilwane siphethwe i-glaucoma, noma umfutho ophakeme ongaphakathi kweso, noma olunye uhlobo lwesifo esikhwameni seso. Noma ngabe siyini isizathu, kubalulekile ukuthi sithathe isilwane sethu siye kudokotela ngokushesha.
Khwehlela: Yize ukukhwehlela kuyinkinga ejwayelekile emakati, ngoba kuyindlela evikelayo yokuqeda uketshezi noma izidumbu zangaphandle ezifika emphinjeni noma emgodini wokuphefumula, kungathinta nohlelo lokuphefumula, kuvimbe amandla okuphefumula futhi kuvimbele lonke uhlelo lokuphefumula. Ngokuvamile, izimbangela zokukhwehlela kungaba inyumoniya, i-bronchitis, phakathi kwezinye izifo, ngakho-ke sincoma ukuthi uyise isilwane kudokotela wezilwane ngokushesha okukhulu.
Uhudo olunegazi: igazi esitokisini, yize kunzima ukuhlukanisa kwezinye izimo, kubalulekile ukuthi sinake lapho kumnyama impela, ngoba kungaba uphawu lwezifo ezimbi, ngakho-ke kufanele sivakashele udokotela ngokushesha okukhulu .
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Amakati » Izifo » Izimpawu zekati lakho uma lingaphilile
Ukwahlukaniswa Ngokwesayensi Kwamakati
Ukudla kwebarf: ukudla kwemvelo kwekati lakho